Guddoomiye ku xigeenkii xaafadda Xaawa-taako ee Beledweyne oo la dilay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Guddoomiye ku xigeenkii xaafadda Xaawa-taako ee Beledweyne oo la dilay
Goobjoogayaal ayaa HOL u sheegay in qof ku hubeysan bastoolad uu ku toogtay xaafadda xaawa-taako, gaar ahaan laanta Nuur xawaad. Marxuumka ayaa marka la dilayay waxa uu kasoo baxay garoon uu mas’uul ka ahaa oo lagu ciyaaro kubadda cagta.
Allaha U Naxariistee Jeelle Gaarane ayaa waxa uu kamid ahaa dhalinyarada sida wanaagsan looga yaqaannay magaalada Beledweyne, waxa uuna sidoo kale maamule ka ahaa goob lagu dhigto GYM-ka, sida HOL ay u sheegeen qaar kamid ah saaxiibadii.
Magaalada Beledweyne oo xarun u ah Gobolka Hiiraan waxay kamid aheyd magaalooyinka ugu wanaagsan xagga ammaanka Hirshabeelle. Hase-ahaatee falkii xalay dhacay ayaa dadka qaar ku sheegayaan in weli khatarro dhinaca ammaanka ah ay jiraan
Guddoomiye ku xigeenkii xaafadda Xaawa-taako ee Beledweyne oo la dilay was last modified: August 11th, 2020 by Admin
Somaliland iyo Taiwan oo wakiilo is dhaafsaday